नेपाल टेलिकमको मुनाफा घट्यो - नेपालबहस
गृहपृष्ठ › बिज्ञान/प्रविधि
नेपाल टेलिकमको मुनाफा घट्यो
३० माघ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको नेपाल टेलिकमले अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ। विवरण अनुसार कम्पनीको मुनाफामा घटेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासम्ममा कम्पनीले ३ अर्ब २८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ। यो अधिल्लो वर्ष टेलिकमले ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मुनाफा गरेको थियो।
पुष मसान्तसम्म कम्पनीको बिक्री मुनाफा १७ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँमा पुगेको हो छ। त्यसैगरी, टेलिकमको अन्य मुनाफा २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ। टेलिकमको सञ्चालन तथा मर्मत, ह्रासकट्टी जस्ता खर्चहरुमा केही वृद्धि भएको छ।
मुनाफासँगै टेलिकमको प्रतिशेयर मुनाफा पनि गिरावट आएको छ। गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा ६५ रुपैयाँ ८६ पैसा रहेको टेलिकमको यस्तो आम्दानी चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा ४३ रुपैयाँ ८६ पैसामा झरेको छ।
टेलिकमको प्रतिशेयर नेटवर्थ ६३५ रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात २८.८० गुणा रहेको छ। १५ अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको टेलिकमको जगेडा कोषमा ८० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ सञ्चित छ।
टेलिकमलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन सञ्चारमन्त्रीकाे निर्देशन ३ हप्ता पहिले
नागरिक एपप्रति प्रयोगकर्ताको आर्कषण, तीन लाख बढीले गरे डाउनलोड १ महिना पहिले
२६ लघुवित्तको लाभांश घोषणाः पन्ध्रले गरे बुक क्लोज, बाँकीको कहिले ? १ महिना पहिले
फाइबर टू दि होम मार्फत आईपी टीभी सेवा सञ्चालन २ महिना पहिले
सूचना महामार्ग : चार वर्षमा २२ प्रतिशत काम २ महिना पहिले
तपाईको आजको राशीफल कस्ताे छ ? ३१ मिनेट पहिले
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे कमल खोलाको पुल उदघाटन ११ घण्टा पहिले
फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल र सिमाना कायम ९ घण्टा पहिले
गलेश्वरको शिवालय मन्दिरको छाना फेरिने १५ घण्टा पहिले
राष्ट्र बैंकले ८ अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै १२ घण्टा पहिले
२४ घण्टामा थप ७८ जना कोरोना संक्रमित ८ घण्टा पहिले
तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका ठेकेदार र मजदूरबीच तनाब ६ घण्टा पहिले
भाेली पाँचौं संस्करणको ‘र्याली अफ होप’ हुँदै, विश्व नेताहरुले सम्बोधन गर्ने २ दिन पहिले
लक्षित समूहमध्ये आधाभन्दा कमले मात्रै लगाए कोरोना खोप ४ दिन पहिले
युरोरडिस फोटो अवार्डमा नेपाल दोस्रो ४ दिन पहिले
आज बाबुराम उपचारका लागि भारत जाने १ हप्ता पहिले
सालपा विकास बैंकले माग्यो कर्मचारी, प्लस टू पासले आवेदन दिन सक्ने ६ दिन पहिले
सौर्य तारबारको मर्मत नहुँदा हात्ती गाउँ पस्न थाले ३ दिन पहिले
सर्ट मुभी एक लभरको फस्टलुक सार्वजनिक ५ महिना पहिले
आज नेकपाका उपाध्यक्ष गौतमविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाई हुँदै ५ महिना पहिले
कांग्रेसमा धार्मिक स्वतन्त्रताको बहस १ वर्ष पहिले
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानद्वारा कोरोना फैलिनुमा विपक्षीलाई दोषारोपण ३ महिना पहिले